The Meaning of Shwe Yin Kyaw: Friendly Visitors,
Miss Monica and Miss Pacona who came from Spain visited to Sayar Aung Myo Aung, when they arrived in Maesot. They suggest with him about Buddhism, five precepts, mediation to attain tranquility and religions.
Sayar Aung Myo said and explained them about the holy arts subjest of Shwe Yin Kyaw that can cure the people who are attacked by bad evils and ghosts. They followed in Shwe Yin Kyaw. Then Sayar Aung Myo gave them the holy arts subjests of Shwe Yin Kyaw especially art of self-defense (occult science).
စပိန်နိုင်ငံသူ Miss Monica နှင့် Miss Pacona တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ဆရာဦးအောင်မျိုးထံ အလည်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာဦးအောင်မျိုးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း၊ ငါးပါးသီလ၊ သမထ ဝိပဿနာ ကျင့်စဉ်များအကြောင်းများကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဘာသာရေးအကြောင်းများလည်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။
ထို့နောက် ဆရာဦးအောင်မျိုးမှ ရွှေရင်ကျော်ပညာအကြောင်း ရွှေရင်ကျော်ပညာဖြင့် မိစ္ဆာအောက်လမ်း လက်ချက်ကြောင့် ပယောဂဝေဒနာရှင်လူသားများကို ကယ်တင်မှု့ပြုနိုင်ကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက် အောင် ရှင်းပြခဲ့ပြီး အထက်လမ်းပညာ ရွှေရင်ကျော်ပညာကို စိတ်ဝင်စားယုံကြည်ပြီး (ကိုယ်လုံကိုယ်ခံ) ပညာကို ဆရာဦးအောင်မျိုးထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
Posted by Shwe Yin Kyaw at 9:08 PM